20 လက်မ Poly နှင်း Pusher ဂေါ်ပြား - တရုတ် Richina
Basic Info Model No.: H508 Head Material: Plastic Specification: Medium Application: Garden Shovel, Snow Shovel, Farming Shovel Handle Material: Steel Shape: Square Shovel Function: Multifunctional Folded: Unfolded Attachment: Attachment Customized: Customized Color: Other Overall Length: 1230mm Head Size: 508*280mm Additional Info Packaging: 12pcs/ctn Productivity: 300000pcs per month Brand: RHE Transport...
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: H508
ယေဘုယျအား Length: 1230mm
ဦးခေါင်းအရွယ်အစား: * 280mm 508
အဆိုပါ Poly နှင်း Pusher ရေမှုတ်များ ထိတ်လန့်ဒိုင်းလွှားကို D-ချုပ်ကိုင်နှင့်အတူပုံမှန်အားအတွက် 1/2 အထိချုံ့ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသူရဲ့လက်ကောက်, တံတောင်ဆစ်ချိုးခြင်း, ပခုံးလွှဲပြောင်းသောထိတ်လန့်မှုကိုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်စုပ်ယူ။ အဆိုပါအောက်မှာဝှက်ထားတဲ့ချွန်ထက်အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်အစွန်းနှင့်အဆက်အသွယ်သို့ကွှလာပြီးနောက် နှင်းကျ။ အဆိုပါ Shock Shield ကိုအသုံးပြုသူအဆင်မပြေသို့မဟုတ်ဒဏ်ရာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်ရေမှုတ်များခွင့်ပြုထားတဲ့ 50% အထိကမမျှော်လင့်တဲ့သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Shock Shield ကိုအပြင်, ဒီအပျေါဓါး Poly နှင်း Pusher ဂေါ်ပြား တစ်ဦးနှင့်ဆင်တူ - သုံးစွဲသူမစိုက်ချောမွေ့မျက်နှာပြင်ဆီးနှင်းချွတ်လှိမ့်ခွင့်ပြုထားတဲ့အပိုကျယ်ပြန့်ချင်းဝက်, features ဆီးနှင်းထယ် ။ အစားဓါးပေါ်တက် piling နှင်းကျမှုကြောင့်လှည်းရပ်တန့်ဖို့ရှိခြင်း၏, သင်မစိုက်တဦးတည်းရွေ့လျားမှုအတွက်ချောမွေ့မျက်နှာပြင်၏ချွတ်ဆီးနှင်းလှိမ့်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဤသည် Poly နှင်း Pusher ဂေါ်ပြား သငျသညျဘေးကင်းနှင့်စမတ်အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
PP ဓါး, အရွယ်အစား 508 * 280mm
ပလပ်စတစ်အဖုံးနှင့်အတူ DIA 28,5 မီလီမီတာသံမဏိပြွန်လက်ကိုင်
ကြီးမားတဲ့အဆင်ပြေ D ကိုအသွင်သဏ္ဌာန်ချုပ်ကိုင်ထား
ဝက်အူများကချိတ်ဆက် Blade နှင့်ကိုင်တွယ်, Wave ကိုနံရိုးဒီဇိုင်းကိုဓါး strenger အား
အာဏာနှင့် tool ကိုဘဝဖြတ်တောက်အကြမ်းခံသတ္တုအစွန်းတိုး။
စံပြ Poly Pusher ရှာဖွေနေ နှင်းရေမှုတ်များ ထုတ်လုပ်သူ & ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း? ငါတို့သည်သင်တို့ဖန်တီးမှုအတွက်အကူအညီရရန်အကြီးအစျေးနှုန်းများမှာကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးရှိသည်။ လူအားလုံးတို့သည် Snowplow နှင်း Pusher အရည်အသွေးကိုအာမခံဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့သံမဏိလက်ကိုင်နှင့်အတူပလတ်စတစ်နှင်း Pusher ၏တရုတ်မူလအစစက်ရုံဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။
ယခင်: bug ကလေးများဥယျာဉ် Tools များသတ်မှတ်မည်ကိုငျတှယျ
နောက်တစ်ခု: မော်တော်ကားအဘို့အနှင်းရေမှုတ်များတပ် ချ. အိတ်ဆောင်
လက်နှင်းရေမှုတ်များနှင်း Pusher operated
အကြီးစား Duty ပလပ်စတစ်နှင်းရေမှုတ်များ
အကြီးစား Duty နှင်းရေမှုတ်များ
အားကစား Utility ကိုတယ်လီစကုပ်မော်တော်ကားနှင်းရေမှုတ်များ
မော်တော်ကားအဘို့အနှင်းရေမှုတ်များတပ် ချ. အိတ်ဆောင်